Banyere Anyị - Zhejiang Kavoun Auto Parts Co., Ltd
Welcome to Zhejiang Kavoun Auto Parts Co., Ltd (mbụ kwuru na Ningbo Hi-Tech Mpaghara Kavoun Nzipu Parts Co., Ltd)
Anyị ụlọ ọrụ bụ a ọkachamara emeputa na ekspootu igwe chụpụrụ akụkụ na nnyefe eriri. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke mmepe, ihe karịrị iri na abụọ anāchi achi, na obodo e guzobere iji na-enye ahịa outlets na ọrụ technicians na ọkachamara ahịa ìgwè, na nwere ike oru mmepe ike. Anyị gafere ISO9001: 2000 quality management usoro asambodo na emejuputa atumatu na TS16949 quality management usoro ọkọlọtọ.
Isi na ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ndị bụ "KAVOUN" na "XIAOHUOBAN" ika HNBR Timingbelt na ČR Timingbelt, abụọ-kwadoro gia synchronous belt, agbanwe ọsọ V belt, ụgbọala V belt, akpaaka oge belt, multi nkpirikpi belt, ikesiike wheel, synchronous belt wheel, belt wheel, na mgbapụta, wiper, ọbọp V-belt, na ndị ọzọ nnyefe akụkụ. Ọ na ọtụtụ-eji ụgbọala, igwe ngwá ọrụ, akwa, ụtaba, Petrochemical, nri, electric ngwaọrụ, nkwakọ, ezinụlọ eletriki ngwa, mines, engineering ígwè na ndị ọzọ ọrụ.
The ngwaahịa nke anyị ụlọ ọrụ na-ji elu technology, elu àgwà, ezi mma, ịka nká na-eguzogide, corrosion na-eguzogide, elu okpomọkụ na-eguzogide, mara mma anya, inogide na inogide na na. Anyị natara elu otuto si ahịa na-ere n'ụwa nile.
Site na ụbọchị nke ya nwa, ọrụ anyị, na-arapara n'ahụ ndị echiche nke "na-akwalite mmepe na sayensị na nkà na ụzụ, na-ewere àgwà dị ka ndị isi na ndị ahịa hiwere", na-amalite mmụọ nke "ịnọgidesi ike n'ihe, ọhụrụ na klas mbụ". Site nkà na ụzụ ọhụrụ, management ọhụrụ na nnyocha na mmepe nke elu na nkà na ụzụ ọhụrụ ngwaahịa, ụlọ ọrụ mgbe niile mma technology ọdịnaya nke ngwaahịa, na bụ maka ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ. Ahịa merie a ọzọ amamiihe echi.